Impumelelo yabafundi ibandakanya ukubakho komfundi kunye nokuthatha inxaxheba kwabafundi. Amanyathelo okusebenza komfundi nokuba ngabafundi badibene okanye bagqithile kwimigangatho yenqanaba kunye nolindelo. Amanyathelo okuthatha inxaxheba kwabafundi nokuba ngaba abafundi bathathe inxaxheba kwaye bagqibezela iimvavanyo zikarhulumente ngokubanzi. Ngabafundi kuphela abachitha uninzi lonyaka wesikolo ababhalise esikolweni ababandakanywayo xa kunikwa ingxelo ngokusebenza kwabafundi. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018-2019)
Benze njani abafundi kule ntlangano kwiimvavanyo zikarhulumente?
Amanyathelo okusebenza komfundi ukuba ngaba abafundi badibene okanye bagqithile kwimigangatho yenqanaba kunye nolindelo.
IsiNgesi / ubugcisa boBugcisa
I-avareji kaRhulumente 47.9%
IsiNgesi / ubugcisa boBugcisa Ibanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 47.8%
Ubuchule beMathematics Ibanga 3-8
Ibakala 4 &amp; 6
I-avareji kaRhulumente 47.4%
Ubuchule beSayensi Ibakala 4 &amp; 6
Ibanga le-10 (Biology)
I-avareji kaRhulumente 38.6%
Ubuchule beSayensi Ibanga le-10 (Biology)
Ubuchule beZifundo zeNtlalo
I-avareji kaRhulumente 46.0%
Ubuchule beZifundo zeNtlalo Ibanga lesi-5
I-avareji kaRhulumente 87.3%
Ubuchule bokufunda Ibakala 3
Benza njani abafundi kule ntlangano ngokuthelekiswa neethagethi zikarhulumente zethutyana kubugcisa besiNgesi / boLwimi kunye neMathematics?
Ithagethi yethutyana ibonisa ukuba inkqubela phambili yonyaka efunekayo ukuze kufezekiswe iinjongo zexesha elide zikarhulumente.
Ngawaphi amanqanaba obuchule abafundi beli qumrhu abonisa?
Amanqanaba an ichaphaza eliluhlaza abonisa ukupasa amanqaku abonisa impumelelo yokufezekiswa kwemigangatho yenqanaba kunye nolindelo.
Apha ngezantsi kubuchule
IsiNgesi / ubugcisa boLwimi kumaBanga 3-8
IMathematics kwiBanga 3-8
Inzululwazi kumaBanga 4 &amp; 6
Inzululwazi yeBanga le-10 (Biology)
IsiNgesi / ubugcisa boLwimi kwiBanga le-10
Mathematics Ibanga le-10
Athini amaqondo okuthatha inxaxheba kweli qumrhu kuvavanyo lukarhulumente?
Amanyathelo okuthatha inxaxheba kwabafundi nokuba ngaba abafundi bathathe inxaxheba kwaye bagqibezela iimvavanyo zikarhulumente ngokubanzi.
Ukuthatha inxaxheba kwesiNgesi / kubuGcisa boLwimi
I-avareji kaRhulumente 99.6%
Ukuthatha inxaxheba kwesiNgesi / kubuGcisa boLwimi Ibanga 3-8
Ipesenti yabafundi abathatha inxaxheba kulunye uvavanyo lwesiNgesi / uLwimi lwezoBugcisa kumabanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 97.3%
Ukuthatha inxaxheba kwesiNgesi / kubuGcisa boLwimi Ibanga le-10
Ipesenti yabafundi abathathe inxaxheba kulunye uvavanyo lwesiNgesi / uLwimi lwezoBugcisa kwiBanga le-10
Inxaxheba yeMathematics Ibanga 3-8
Ipesenti yabafundi abathatha inxaxheba kulunye uvavanyo lweMathematics kumabanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 97.5%
Inxaxheba yeMathematics Ibanga le-10
Ipesenti yabafundi abathatha inxaxheba kulunye uvavanyo lweMathematics kwiBanga le-10
I-avareji kaRhulumente 98.6%
Inxaxheba yeSayensi Ibakala 4 &amp; 6
I-avareji kaRhulumente 84.4%
Inxaxheba yeSayensi Ibanga le-10 (Biology)
Jonga iNgxelo yoNyaka yokuSebenza (APR). https://media.doe.in.gov/apr/2019/f2400-standard.pdf
Funda ngakumbi malunga nokusebenza kwabafundi kuvavanyo lukazwelonke lwenkqubela phambili yemfundo. https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
Funda ngakumbi malunga nabafundi bezikolo zaseprayimari eIndiana. http://www.elacindiana.org/data/elac-annual-report-interactive-dashboard/